Liverpool Oo Xiddig 107 Milyan Ah Hoggaanka U Haysa, Arsenal Oo Daafac Ka Doonaysa PSG & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga - Gool24.Net
Liverpool Oo Xiddig 107 Milyan Ah Hoggaanka U Haysa, Arsenal Oo Daafac Ka Doonaysa PSG & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
January 16, 2020 Apdihakem Omer Adem
West Ham ayaa doonaysa inay qaab amaah ah kusoo qaadato khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee Ross Barkley kaas oo tababaraha West Ham ee David Moyes kaga soo hoos ciyaaray Everton. (Mirror)
Tottenham ayaa ku jirta wada hadalo ay kula soo wareegayso weeraryahanka Cape Verde ee Ze Luis on loan oo Porto ka tirsan Porto. (Record – in Portuguese)
Inter Milan ayaa heshiis la gaadhay khadka dhexe ee kooxda Tottenham e Christian Eriksen laakiin Tottenham ayaa ka doonaysa Milan inay laba jibaarto lacagta 10-ka Milyan ee euro ah ee ay ku doonayso. (Calciomercato – in Italian)
Walow heshiiska Edinson Cavani uu yahay mid dhacaya xagaaga soo socda haddana Paris Saint-Germain ayaa Atletico Madrid oo ka doonaysay u sheegtay in dalabkooda 10-ka Milyan ah ay 30 Milyan soo gaadhsiiyaan. (Marca)
Liverpool ayaa lala xidhiidhinayaa inay 107 Milyan oo Pound xagaaga ku dalban doonto da’yarka Bayer Leverkusen ee Kai Havertz waxaana ay kaga gacan sarreeyaan tartankiisa haatan Man United, Barcelona iyo Bayern Munich. (Mundo Deportivo, via Mirror)
Arsenal ayaa doonaysa inay 6 Milyan kula soo wareegto daafaca bidix ee PSG Lyvin Kurzawa kahor inta uusan heshiiskiisu dhicin xagaaga. (Sun)
Kubad sameeyaha kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaa sheegay inuu wakhti adag kusoo hoos qaatay tababarihii hore ee Unai Emery balse uu haatan ku faraxsan yahay qaabka uu Mikel Arteta wax u wado heshiiskiisa ilaa 2021-ka ahna uu doonayo inuu dhammaysto. (Mirror)
Arsenal iyo kooxda ay xifaaltamaan ee Tottenham ayaa kamida tiraba shan kooxood oo doonaya khadka dhexe ee kooxda Getafe ee Djene Dakonam. Monaco ayaa horeba dalab ay ka gudbisay 28-jirkaas looga soo diiday. (Sun)
Heshiis ciyaartoy is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin xiddiga Inter Milan ee Matteo Politano iyo daafaca bidix ee Roma Leonardo Spinazzola, ayaa la hakiyay kaddib markii ay Inter u sheegtay Spinazzola inuu maro tijaabooyin dheeri ah oo taam ahaanshihiisa ah Khamiista. (Corriere dello Sport – in Italian)
Manchester United ayaa doonaysa inay khad dhexe qaab amaah ah kusoo qaadato ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka waxaana dookh u noqday khadka dhexe ee Atletico Madrid ee Marcos Llorente. (Manchester Evening News)
Barcelona ayaa ku dhaw inay xiddiga ree Brazil ee Matheus Fernandes kala soo wareegto Palmeiras iyagoo ka bixinaya lacag 7 Milyan ah oo lagu daray afar Milyan oo gunnooyin ah. (Mundo Deportivo – in Spanish)